Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Fiaramanidina mpandeha Aeromexico ho an'ny karatra: valiny amin'ny vonjy taitra COVID-19
Mandritra ny Toetran'ny vonjy taitra ny coronavirus COVID-19, ny entana amin'ny rivotra dia ilaina amin'ny fandefasana entana, fanafody, fitaovana fitsaboana, sakafo, ary vokatra hafa manerantany. Miala izao ny fiaramanidina mpandeha Aeromexico ho an'ny entana noho ny krizy ankehitriny.
Noho io fizahana ara-pahasalamana io sy ny fanohanana ny fitohizan'ny toekarena sy ny orinasa, Aeromexico dia hampiasa ampahany amin'ny fiaramanidina miorina amin'ny entana amin'ny alàlan'ny fizarana zotram-piaramanidina ihany, Aeromexico Cargo. Ny sidina anio dia hanomboka amin'ny tanànan'i Mexico mankany Frankfurt ary handefa 15 taonina.
Ny serivisy dia miasa ho toy ny charte, midika izany amin'ny fangatahana sy amin'ny fandefasana vokatra mora simba, biby velona, ​​entana lafo vidy, teknolojia ary zava-mahadomelina, ankoatry ny hafa.
Ao an-toerana, Aeromexico dia afaka mitondra entana any amin'ny seranam-piaramanidina 41, ary iraisam-pirenena any Etazonia, Kanada, Amerika afovoany sy atsimo, azia ary eoropa.
Ny Boeing 787-9 izay hiasan'ity serivisy voalohany ity dia sariaka amin'ny tontolo iainana. Ny fitaovana avoakan'ny ampitahaina amin'ny fiaramanidina hafa dia 57% ambany ny fandotoana amin'ny tabataba mandritra ny fikajiana sy ny fipetrahana ary ny 20% ny entona gazy karbonika (CO2). Ilay fiaramanidina ihany koa dia manana ny fiaramanidin'ny fiaramanidina Boeing 737 hanao asa mitovy amin'izany.
Sidina iraisam-pirenena maromaro izay miasa amin'ny maha-fiaramanidina mpandeha no manao tetezamita mitondra entana. Ny fangatahana fandefasana entana dia nihena noho ny coronavirus sy ny filàna zavatra toy ny fanafody.
Mirongatra ny vidin'ny fandefasana rivotra manerana an'izao tontolo izao ary manandrana manaraka ny fangatahana mpitatitra entana ny kaompaniam-pitaterana mpandeha satria very ny tobin'ny mpandeha. Ny vidin'ny fandefasana entana an'habakabaka avy any Londres mankany Etazonia dia nitsambikina 128 & raha nitombo 109% kosa ny làlana Frankfurt hatrany Etazonia tamin'ny herinandro lasa teo.
Aeromexico dia kaompaniam-pitaterana sainam-pirenen'i Mexico miorina ao Mexico City. Mampandeha serivisy voalahatra ho any amin'ny toeran-kaleha maherin'ny 90 any Mexico izy io; Amerika avaratra sy atsimo ary afovoany; ny Karaiba; Eoropa; sy Azia. Ny fototra sy foiben-toerany dia any Mexico City, miaraka amin'ireo ivon-toerana faharoa any Guadalajara sy Monterrey.
White House dia miteny amin'ny New Yorkers izay nandao ny tanàna ho 'quarantine' mandritra ny roa herinandro